ပြည့်တန်ဆာမလေး ရွှေကြာဇာတ်ရုပ်နဲ့ သုံးထပ်ကွမ်းအကယ်ဒမီဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့ ဖွေးစိန်လေး - Cele GabarCele Gabar
ဒီနှစ်ရဲ့ အကယ်ဒမီစာရင်းဝင် ရုပ်ရှင်(၁၀)ကားထဲမှာ (၆)ကားပါဝင်ပြီး ဇာတ်ဆောင် မင်းသမီးနေရာကနေ သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီး ဖွေးဖွေးဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေ ရရှိစေချင်တဲ့ တတိယမြောက် အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဆောင် အမျိုးသမီးဆုကို ထပ်မံရရှိခဲ့ပြန်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
သူမဟာ အရည်အချင်းပြည့်မီပြီး တကယ့်ကို စံချိန်တင် မင်းသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့
အရမ်းကို မှောင်မိုက်ပြီး မထူးဇာတ်ခင်းနေရတဲ့ ပြည့်တန်ဆာအမျိုးသမီးငယ်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀ကို လောကဓံရဲ့ ကျရာဇာတ်တွေအတိုင်း ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး တဖက်မှ အားကိုးစရာ၊ ရင်ဖွင့်စရာ ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ ဆုံတွေ့ချိန်မှာ ချစ်ခွင့်တောင် မရှိတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘ၀တူမိန်းကလေးတွေကို ကူညီရင်း “ဒီဘ၀ထဲကို ၀င်မလာပါနဲ့။ အောက်တန်းကျလွန်းလို့ပါ၊ လူနိမ်ခံရလွန်းလို့ပါ။ လူဖြစ်ရှူံးလွန်းလို့ပါ” ဆိုတဲ့ စကားတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ထိရှစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ရွှေကြာ ဆိုတဲ့ ပြည့်တန်ဆာမိန်းကလေး ဇာတ်ကောင်နဲ့  ဒီနှစ်ရဲ့ အကယ်ဒမီ ဆုကို ထပ်မံရရှိခဲ့ပြီး ရွှေကြာလိုမိန်းကလေးတွေအတွက် ဒီဇာတ်ကားလေးဟာ ပညာအနေနဲ့ပါ လည်းကောင်း၊ တကယ့်ကို အားဖြစ်စေတဲ့ ပြယုပ်လေးတစ်ခုအဖြစ်လည်းကောင်း အကယ်ဒမီ ဆု(၃) ဆု သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ ရွှေကြာရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးကို ဂုဏ်ပြုရင်း ဖွေးစိန်လေးအတွက် ပျော်ကြတယ်မဟုတ်လား…. ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်ကြီးရေ…။
Source : CeleGabar creation & Mahar;
ဒီနှဈရဲ့ အကယျဒမီစာရငျးဝငျ ရုပျရှငျ(၁၀)ကားထဲမှာ (၆)ကားပါဝငျပွီး ဇာတျဆောငျ မငျးသမီးနရောကနေ သရုပျဆောငျခဲ့တဲ့ ထိပျတနျးမငျးသမီး ဖှေးဖှေးဖွဈပွီး ပရိသတျတှေ ရရှိစခေငျြတဲ့ တတိယမွောကျ အကောငျးဆုံး ရုပျရှငျဇာတျဆောငျ အမြိုးသမီးဆုကို ထပျမံရရှိခဲ့ပွနျပွီဖွဈပါတယျ။
သူမဟာ အရညျအခငျြးပွညျ့မီပွီး တကယျ့ကို စံခြိနျတငျ မငျးသမီးတဈယောကျအနနေဲ့
အရမျးကို မှောငျမိုကျပွီး မထူးဇာတျခငျးနရေတဲ့ ပွညျ့တနျဆာအမြိုးသမီးငယျလေးတဈယောကျရဲ့ဘဝကို လောကဓံရဲ့ ကရြာဇာတျတှအေတိုငျး ပီပွငျအောငျ သရုပျဆောငျနိုငျခဲ့ပွီး တဖကျမှ အားကိုးစရာ၊ ရငျဖှငျ့စရာ ကောငျလေးတဈယောကျနဲ့ ဆုံတှခြေိ့နျမှာ ခဈြခှငျ့တောငျ မရှိတဲ့ မိနျးမတဈယောကျအနနေဲ့ ဘဝတူမိနျးကလေးတှကေို ကူညီရငျး “ဒီဘဝထဲကို ဝငျမလာပါနဲ့။ အောကျတနျးကလြှနျးလို့ပါ၊ လူနိမျခံရလှနျးလို့ပါ။ လူဖွဈရှူံးလှနျးလို့ပါ” ဆိုတဲ့ စကားတှနေဲ့ ပရိသတျတှကေို ထိရှစခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ရှကွော ဆိုတဲ့ ပွညျ့တနျဆာမိနျးကလေး ဇာတျကောငျနဲ့ ဒီနှဈရဲ့ အကယျဒမီ ဆုကို ထပျမံရရှိခဲ့ပွီး ရှကွောလိုမိနျးကလေးတှအေတှကျ ဒီဇာတျကားလေးဟာ ပညာအနနေဲ့ပါ လညျးကောငျး၊ တကယျ့ကို အားဖွဈစတေဲ့ ပွယုပျလေးတဈခုအဖွဈလညျးကောငျး အကယျဒမီ ဆု(၃) ဆု သိမျးပိုကျခဲ့တဲ့ ရှကွောရုပျရှငျ ဇာတျကားကွီးကို ဂုဏျပွုရငျး ဖှေးစိနျလေးအတှကျ ပြျောကွတယျမဟုတျလား…. ဆယျလီကမ်ဘာပရိသတျကွီးရေ…။
Previous Previous post: မှော်ဝင်သမန်းကျားနဲ့ (၂၀၁၈)ခုနှစ် အတွက် အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆုရ ရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့ သူထူးစံ
Next Next post: အကယ်ဒမီဆုတွေသိမ်းကြုံး ရရှိခဲ့တဲ့ မုန်းစွဲရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး
အပြင်မှာနေရင် အရှက်အကြောက်ကြီးပေမဲ့လည်း တာတူးဇာတ်ရုပ်ကြောင့် မတ်မတ်လို့ အစခံနေရပြီလို့ ဆိုလာတဲ့ နေတိုး
Published: March 16, 20194:36 pm
အပြောင်းအလဲတစ်ခုလုပ်ပြဖို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ ကျော်ကျော်ဗိုလ်
Published: February 14, 20195:56 pm
အလုပ်တွေခေတ္တဖယ်ထားပြီး နိုင်ငံခြားမှာ သာယာကြည်နူးနေကြတဲ့ အန်ကယ်လေးတို့ စုံတွဲ
Published: February 28, 20196:01 pm